PARIJATMEDIA - Page3of 241 - Updating Nepali
यी हुन् २०२० को संसारकै ‘नम्बर १’ सुन्दरी [फोटो फिचर]
सुन्दरताको परिभाषा दिन निकै कठिन छ । हरेक व्यक्तिका लागि सुन्दरताको परिभाषा फरक हुन सक्छ । सुन्दरताको न कुनै खास अर्थ हुन्छ, न त यसलाई सीमाभित्र नै राखेर हेर्न सकिन्छ। र पनि सुन्दरतासम्बन्धी केही मानक दृष्टिकोण बनाएर यसबारे अध्ययन, अवलोकन गर्न सकिन्छ। संसारमा बेलाबखत् सुन्दरतासम्बन्धी विभिन्न प्रतियोगिताहरु पनि हुँदै आएका छन्। सुन्दरताको विषयमा संसारभर अनेकौं प्रतियोगिता हुने गर्छन् । केही व्यक्तिहरु यस्ता हुन्छन् जसलाई संसारभरका मानिसहरु सुन्दर मान्छन् । आज हामी संसारभरमा सबैभन्दा सुन्दरी महिलाको तस्बिर दखाउँदैछाै । जसलाई वन्डरलिस्टडटकम नामक वेबसाइटले आफ्नो सर्वेक्षणमा संसारकै सबैभन्दा सुन्दर महिलाको सुचि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा नं १ मा पर्न सफल भएकी छिन् ‘हेन्डे एरेल’ । एरेल पुरानो टर्किस नायिका एवं मोडल हुन् । उनको जन्म सन १९९३ नोभेम्बर २४ मा भएको हो । यो हिसावले अहिले
काठमान्डौ । म काठमान्डौमा बेचलर रनिङमा पढ्दैछु । मेरो पढाइको विषय मेनेजमेन्ट हो । त्यसकारणा जापन जानको लागी मैले लगभग सम्पुर्ण तयारी गरिसकेको छु । त्यसैले मैले यो सोचेकी म अब पढ्न जाने हो । मेरो लगभग उमेर पनि पुगीसकेको छ । साथमा मैले विवाह गरेर एउटा इमान्दार केटालाई लग्न सके भने उसले नि पैसा कमाउन सक्छ । अनि मलाई पनि साहरा हुनछ । भन्ने मेरो मनमा एउटा विचार आयो । उक्त विचार मैले मेरो घरमा बुबाआमालाइ पनि भने, र बुबाआमाले पनि त्यो कुरा लाई स्विकार गर्नुभयो । मैले लगभग २,३ महिना सम्म इमानदार मेहनेती, सहनसिल भएको २२ बर्ष नाघेको केटा पनि खोजे तर भने जस्तो पाउन सकिन र म पूर्व घरबाट फर्केर आए । र हाल म अहिले पनिकाठमान्डौको बसुन्धारा मै बसिरहेको छु । मलाइ छिटो भन्दा छिटो वाहिर जानु पर्ने भएको हुदा सोहि वमोजिमको मेहेनति इमानदार केटा पाएमा विवाह गरिहाल्ने सोँचमा छु । आज मैले राम्रो असल केटा
प्रेम गरेपछि विवाह गर्नैपर्छ भन्ने छैन । यद्यपि हामीकहाँ प्रेमलाई नै विवाहको पहिलो खुड्किलो मानिन्छ । अर्थात प्रेम त्यसबेला सफल मानिन्छ, जब त्यो विवाहमा रुपान्तरण हुन्छ । प्रेम सम्बन्धमा रहेकै बेला पार्टनरका सबै आनीबानी थाहा हुन्छ । कतिपय आनीबानी यस्ता हुन्छन्, जसले वैवाहिक जीवनलाई खल्लो बनाउँछ । यदि पार्टनरको संकेत खराब छ भने त्यस्तो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुँदैन त्यसैले यी संकेत देखिएमा बुझ्नुपर्छकी सम्बन्ध बिग्रदै छ । १. प्रेम सम्बन्धमा इ*र्षा हुन्छ । सानोतिनो इ*ष्र्याले सम्बन्धलाई मसलेदार बनाउँछ । तर, यो त्यस किसिमको नुन जस्तै हो, जो धेरै भएमा स्वाद बिग्रन्छ । यद्यपी तपाईंको पार्टनर अत्याधिक इष्र्यालु छन् भने तपाईंको सम्बन्धका लागि यो राम्रो संकेत होइन । २. तपाईंको पार्टनर तपाईंको प्राजेक्ट र लक्ष्यको बारेमा के सोच्छन् ? के ऊ नै तपाईंको जीवनको सबै निर्णय लिन्छन् ? तपाई
वि.सं. २०७७ साउन- २६,सोमवार,ई.सं.२०२० अगष्ट -१०, शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० गुँलागा,प्रमादी,दक्षिणायन,वर्षा,भाद्र कृष्णपक्ष तिथि-सप्तमी , ३०:१९ बजे उप्रान्त अष्टमी,नक्षत्र-अश्विनी , २०:५० बजे उप्रान्त भरणी,योग-शूल , ०७:४८ बजे उप्रान्त गण्ड,करण-भद्रा १७:२० बजेदेखि वव , ४३:१४ बजे उप्रान्त कौलव,चन्द्रराशि-मेष,आनन्दादि योग-राक्षस, सूर्योदय-५:३२, सूर्यास्त-१८:४४, दिनमान-३३ घडी ०० पला। मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) – माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेकोछ भने घर परिवार तथा आफन्तको साथ सहयोग पाईनाले मन प्रशन्न रहनेछ । समाजसेवामा समय दिन सक्दा मान तथा सम्मानमा बृद्धि भएर जानेछ । बिलाशी तथा भौतिक सम्पति तथा बस्तुको प्रयोग मार्फत रमाईलो गरि दिन बिताउन सकिनेछ। अध्ययन तथा अध्यापनमा समय दिनेहरुले भनेजस्तो सफलता हात लाग्नेछ। बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) – आफन्त तथा आत्मिय मित्रहरु सँग टाडिए
मुकुन्देको एक युवतीसँग सडकमा टिकटक ‘रोमान्स’ बन्यो भाइरल (भिडियोसहित)
काठमाडौ । मुकुन्द घिमिरेको एउटा भिडियो र तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ । उनी अविवाहित हुन् । त्यसैले उनको विवाहको कुरा सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने गरेको छ । हालै एक युवतीसंगको तस्बिर र भिडियो निकै चर्चित बनेको छ । ती युवती उनको प्रेमिका भन्दै टिप्पणी गरिएको छ । तर वास्ताविकत त्यस्तो होइन्। मकवानपुर स्थायी घर भएकी सर्मिला काठमाडौंमा बस्छिन् । उनी काठमाडौमा बालआश्रम सञ्चालक हुन् । मुकुन्दसंग केही महिना अघि भेट भएको बताउने उनी आफुहरुबीच त्यस्तो केही सम्बन्ध नभएपनि समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले त्यस्तो तस्बिर भाइरल बनाइदिएको बताउँछिन । यो पनि हेर्नुहोस् तर कुराकानीकै क्रममा उनले दुवै जना अविवाहित भएका कारण त्यो कुरा सम्भव पनि हुन सक्ने बताउँछिन् । उनले भनिन् सम्बोधन त अहिले मैले दाई नै भन्ने गरेकी छु । अहिले हामीबीच त्यस्तो केही सम्बन्ध छैन । तर हामी दुवै जना अविवाहित
आज मात्रै काठमाडौंमा थप ९२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौँ। पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ९२ जनामा को’रोनाभा’इरस सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । आइतबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले काठमाडौंका ९० र ललितपुरका २ गरी उपत्यकामा ९२ जनामा को’रोना सं’क्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४० सं’क्रमित डिस्चार्ज भएका छन् । योसँगै सं’क्रमण निको हुनेको कुल संख्या १६ हजार ३५३ पुगेको छ । प्याजको रस : प्याजको रस निकालेर टाउको छालामा लगाएर २५–३० मिनेट त्यत्तिकै छाडिदिनुहोस् । कपालले सोसोस् भन्नका लागि टाउकोलाई तौलियाले छोप्नुहोस् । त्यसपछि सेम्पोले कपाल राम्ररी धुनुहोस् । प्याजका साथ बियर : बियरले कपाललाई प्राकृतिक रुपमा चमकदार बनाउँछ । प्याजको रसलाई बियरमा मिसाएर लगाउनाले कपाल बढ्नुका साथै यसले कण्डिसनरको पनि काम गर्छ । कपाल लामो बनाउनु छ भने यो उपायलाई सातामा दुईपटक प्रयोग गर्नुहोस् ।
अध्यक्ष प्रचण्ड आइसोलेसनमा
काठमाडौँ, २५ साउन । पछिल्ला दिनमा नेपालमा कोरोना महामा’री बढीरहेका बेला शीर्ष नेताहरु पनि थप सर्तक बन्न थालेका छन् । प्रदेशका सांसद, मन्त्री र सभामुखहरुमा कोरोना पुष्टि भएका बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आइसोलेसनमा बसेका छन्। प्रचण्डको सुरक्षामा खटिएका ६ जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएसँगै प्रचण्ड आफ्नै निवासमा आइसोलेसनमा बसेका हुन् । प्रचण्डको पछिल्लो कोरोना रिर्पोट नेगेटिभ आएको भएता पनि उनले केही दिन बाहिर नहिँड्ने निर्णय गर्दै सावधानी अपाउन भन्दै आँफुलाई आइसोलेसनमा राख्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। यो पनिः राती मोबाईल प्रयोग गर्दा हुने हानीहरु छोटकरीमा तौल बढ्ने सुत्ने बेलामा मोबाईल फोन प्रयोग गर्नाले मेटाबलिज्म प्रोसेसमा असर पर्छ । जसले गर्दा हाम्रो तौल बढ्छ । समस्या समाधानमा कठीन सुत्ने बेलामा मोबाईल प्रयोग गर्
चर्चित बलिउड अभिनेता संजय दत्त अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनी लीलावती अस्पतालमा भर्ना भएका हुन् । उनलाई सास फेर्न गाह्रो भएसँगै आइसियूमा राखिएको दैनिक भाष्करले लेखेको छ । ६१ वर्षीय दत्तलाई कोरोना संक्रमण भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । उनको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलनगरिएको छ तर नतिजा नआइसकेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । उनको शनिबार गरिएको कोरोना भाइरसको एन्टिजिन टेष्टमा नतिजा नेगेटिभ आएको थियो। उनले ट्वीटरमार्फत आफ्नो स्वास्थ्यबारे लेखेका छन्, ‘म एकदम ठीक छु । फिलहाल मेडिकल अब्जरभेशनमा छु । लिलावती अस्पतालका डाक्टर, नर्स र स्टाफको मद्धतबाट एक या दुई दिनमा घर फर्किने छु ।’
त्यो मेरो विवाहको पहिलो रात थियो । म पहिलो पटक कुनै पुरुषको अँगालोमा बाँधिनु पर्ने थियो । बिहेअघि नै मैले यो रातको बारेमा नजिकका साथीहरूसँग कुरा गरेकी थिएँ । त्यति बेला भने बिहेअघि मैले हेरेका निलो चलचित्रका दृश्यहरू अस्पष्टरुपमा मेरा आँखा अगाडि नाचिरहेका थिए । म रोमाञ्चित भइरहेकी थिएँ । सजाइएको गिलासमा हालिएको दूधलाई हातमा लिएर शिर निहुराउँदै म कोठामा पसेँ । अहिले सोच्दा पनि त्यो क्षण अत्यन्त परम्परावादी थियो । त्यति बेलासम्म मलाई थाहा थिएन, मैले एउटा अकल्पनीय झट्का व्यहोर्नु पर्नेछ भनेर । उनीहरू आफ्ना मित्रको काँधमा शिर राखेर थकाइ मेटाइ रहेका हुन्थे, हातमा हात राखेर हिँडिरहेका हुन्थे । त्यो देख्दा मलाई ईर्ष्या लागेर आउँथ्यो त्यो घटनाले मलाई निकै दुखित बनायो । मेरो कल्पनामा थियो । जब म कोठाभित्र पुग्ने छु अनि तत्कालै मेरा पतिले मलाई बलियोसँग समात्ने छन्, मेरा शरीरभरि चुम्बन गर्ने
काठमाडौं । नेपालले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको कोरोनाभाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन मात्रै ३ डलर प्रतिडोज (३६० नेपाली रुपैयाँ) मा पाउने भएको छ । भारतको पुणेस्थित सिरम इन्स्टिच्युटले भारत तथा निम्न र मध्यम आय भएका देशहरुको लागि यो मूल्य निर्धारण गरेको टाइम्स अफ इण्डियाले जनाएको छ । सिरम इन्स्टिच्युट भ्याक्सिन उत्पादन परिमाणको हिसाबले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो भ्याक्सिन उत्पादक हो र यो अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको कोरोना भ्याक्सिन उत्पादनमा साझेदार छ । नेपाल हालैको विश्व बैंकको वर्गीकरणमा निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उक्लिएको छ । त्यसअघि नेपाल निम्न आय भएको मुलुकको रुपमा थियो । नेपाल निम्न मध्यम आय भएको मुलुक भएकोले सिरमले सस्तोमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने देशको सूचीमा पर्छ । यद्यपि सिरमले आफूले घाटा व्यहोरेर निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकलाई सस्तोमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन ल